CORONAVIRUS ATY DIANA : Vehivavy iray maty tao Nosy Be, mitontaly 83 ireo marary
Amin’ny ankapobeny dia azo ambara fa tsy mitsahatra mitombo hatrany ny isan’ireo olona mitondra ny tsimokaretina Covid-19 aty amin’ny Faritra Diana. 2 mars 2021
Araka ny antontan’isa voaray farany ny alatsinainy 1 marsa teo dia tafakatra ho 83 ireo olona voan’ny coronavirus aty amin’ny tapany avaratry ny Nosy. Fantatra araka izany fa ao anatin’ny distrikan’i Nosy Be no ahitana olona betsaka voan’ izany raha oharina amin’ireo distrika sasany mandrafitra ny Faritra Diana.
Mahatratra 70 ireo olona manaraka fitsaboana ao Nosy Be ankehitriny, raha ny 33 amin’izany no tranga vaovao, omaly alatsinainy, tao an-toerana.
Ny ao anatin’ny distrikan’Ambilobe irery ihany hatreto no tsy mbola nahitana trangana coronavirus, raha ny aty amin’ny Faritra Diana manokana no resahina.
Ankoatra izany dia miisa 7 ireo olona manaraka fitsaboana aty Antsiranana voalohany raha miisa 3 ny ao Antsiranana faharoa ary 3 hafa ihany koa ao anatin’ny distrikan’Ambanja.
Areti-mandoza tsy mitsitsy ny valanaretina Coronavirus, ka ilaina araka ny fanajana ireo fihetsika sakana, fepetra ara-pahasalamana mba hahafahan’ny tsirairay miaro ny tenany sy ny ho an’ny hafa mba tsy hiparitahan’ny valanaretina.
Raha ny fivoaran’ity areti-mandoza ity aty amin’ny Faritra Diana no resahina, dia vehivavy 46 taona avy ao Antsalaka distrikan’Antsiranana faharoa monina ao Nosy Be no fantatra fa lavon’ny Covid-19, ny alin’ny alahady 28 febroary hifoha alatsinainy 1 marsa teo tao amin’ny hopitaly tao an-toerana.
Araka ny vaovao voaray ihany dia notanterahina ny folakandro ny alatsinainy io ihany ny fandevenana azy. Amin’ny maha valanaretina mifindra ny coronavirus dia tsy maintsy nalevina tao Nosy Be ihany ny razana na dia manam-paniriana ny hitondra azy aza ireo fianakaviany avy ao Antsalaka. Ny fangatahana nataon’ireto farany mba hahita maso ny toerana nanitrihana ny razana no voalaza fa nahatonga ny fandevenana azy tamin’io folakandro io.
Tsy misangy ny valanaretina Covid-19, ka ilaina ny fahatsapan’ny tsirairay amin’ny tokony hanajana ireo fepetra ara-pahasalamana ireo, mba tsy hiparitahan’izany valanaretina mandoza ity.